पक्राउ परेका दिनेशको बयान, मन पराए भन्न सकिन, मेरो पहिल्यै देखि रिसिबी थियो ! – NepalajaMedia
February 17, 2021 136
धनगढीःभागरथीको घटना अभियोगमा पक्राउ परेका किशोर उनको न्याय माग्दै हुने प्रर्दशनमा समेत दैनिकजसो सहभागी हुने गरेको खुलेको छ। सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमै अध्ययनरत उनी भागरथीको न्यायका लागि स्थानीय खोचलेक बजारसहितका ठाउँमा गरिने प्रर्दशनमा उनी सहभागी हुने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
तर प्रर्दशनका क्रममा देखाउने शंकास्पद गतिविधिका कारण प्रहरीले सुरुदेखि नै निगरानीमा राखेर उनका गतिविधि अध्ययन गरिरहेको थियो। मृतक भागरथीका परिवारले समेत उनीमाथि आशंका गरेका कारण निगरानी बढाएको प्रहरीेले अन्ततः उनैले कर णी भागरथीको घटना घटाएको खुलेको प्रहरीले बताएको छ।
अभियुक्तले बयानका क्रममा समेत आफूले नै भागरथीको घटना घटाएको स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई सार्वजनिक गर्दैछ।
घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी आफै घटनाको अनुुसन्धानमा खटिएका थिए।
अभियोगमा पक्राउ परेका किशोरले घरायसी रिसिबीका कारण यो घटना घटाएको बयान दिएका छन्। भागरथी अध्ययनरत दोगडाकेदारकै सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमै कक्षा ११ पढ्ने १७ वर्षकै दिनेश भट्टले ती अभियुक्तले प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा भनेका छन्, ‘घरायसी भागरथी र मेरो परिवारबीच पहिलेदेखि घरायसी रि’सि’बी थियो। सोही कारण मैले ज्या’न लि’एको हुँ।’
प्रहरी स्रोतकाअनुसार उनले भागरथीको ज्या न लि’ने एकल योजनामा आफू पहिल्यैदेखि रहेको उल्लेख गर्दै उचित मौकाको पर्खाइमा बसेको समेत भनेका छन्। कक्षा १२ मा पढ्ने भागरथीलाई दिनेशले लामो समयदेखि एकतर्फी रुपमा मन पराएको तर भन्न नसकेको पनि प्रहरी सामु बताएका छन् ।
भागरथीका छिमेकी समेत रहेका ती अभियुक्तलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। मंगलबार राति नै उनलाई खोचलेक प्रहरी चौकीबाट जिल्ला पुगाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
Prevमेकअपका कारण सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल र मजाकको पात्र बनेकी सुष्मालाई पर्यो यस्तो आपत !
Nextविनयजंग बस्नेत पक्राउ परे लगतै सपना रोका मगरले लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस-
सर्वसाधारणको लागि ओली सरकारले लगायो भर्खरै नयाँ नियम, अब घर बाहिर निस्किनु अघि यो सूचना पढ्नुहोला !
भारतमा फैलिएको नयाँ लहर डरलाग्दो हिसाबले फरक, डाक्टर समेत हैरान
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, सवारीसाधन चलाउन नपाउने देखि यी काम गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगायो प्रसासनले (बिज्ञप्ति सहित)
गीत चोरेको आरोप लागेपछि शिशिर भण्डारीले मुख खोले । यस्तो रहेछ, वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस)
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25321)
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (15903)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12284)
आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. (10264)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (8990)
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ? (8739)
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (8116)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (7941)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7029)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6778)